Usuku My Pet » Ingabe Kukhona onjalo A Thing As A Fight Good In Ebuhlotsheni?
Ingabe Kukhona onjalo A Thing As A Fight Good In Ebuhlotsheni?
Igcine ukubuyekezwa: Septhemba. 17 2020 | 4 imiz ufunde
Nakuba amaphuzu ebhekwa ubudlelwano, kukhona ezifana into njengoba ukulwa okuhle ebudlelwaneni? Yebo ikhona, ezingakholeki. Ukulwa kusiza ubuhlobo ukuze ukhule umbhangqwana uthole bazana kangcono. Njengoba kuyinto akunakugwenywa, imibhangqwana kudingeka sifunde indlela ukulwa angabacwasi.
Ukwazi indlela ukulwa angabacwasi ebaluleke kakhulu ngaphezu kokwazi ukuthi kungani kuqubuka impi endaweni yokuqala, ngisho nakuba ukulwa ngobala akuzona kunomvuzo. Ukuzinika isikhathi lapho omunye umlingani uzizwa sengathi sekuseduze ukuba ulahlekelwe kubaluleke kakhulu, kusukela hhayi ukwenza njalo kungaholela nemiphumela eyingozi kakhulu ngaphezulu wayengalugwema.
Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukwenza omunye uphathina nomuzwa wokuthi simenyezelwa. Abanalo emidlalweni ememeza, njengoba abakaze ukusiza ukuxazulula lutho, njengoba zikhange kungase kube njalo.
Uma ulwa partner komuntu, njalo bafune ukuxazulula impi ngokuthula, kunokuba alwe ukunqoba. Nokho, kusukela lokhu kulula ukukusho kunokukwenza, kukhona umbhangqwana imithetho, okuyinto, Uma elandelwa, empeleni ukwenza ukuthi impi kunomvuzo.
Nokuncishana intukuthelo ngeke isebenze; kunalokho ubeke intukuthelo yakho ngaphesheya umlingani wakho
Intukuthelo umuzwa jikelele, obusho ubuhlungu, usizi, ukuphoxeka ngisho ezisola. It kungadalwa umcimbi ukuthi kwenzeka kudala noma isenzakalo samanje. Nokho, Abantu abaningi abazi indlela yokubhekana intukuthelo.
Intukuthelo kumele ibukwe njengento isambulo, umzwelo esisiza umlingani one uze nezixazululo inkinga. Ngakho, benaka ukuthukuthela kuyosiza ziphathelene imbangela ingxabano kanye isixazululo yayo kalula a little more.
Nginikeza igalelo low ngeke zenze umuntu hero
Ingxabano akuzona izindlela bakhuphule ubuthakathaka umlingani wakho, izimfihlo noma ngisho esidlule nihlukane. Lokhu buhlungu low futhi ubonisa ukuthi enye kungaba too zingalondekile esikhumbeni sabo siqu, Ngakho, uzizwa isidingo ukuhlasela umlingani wabo ukuze zizizwe kangcono, noma a igwala akasalindi impikiswano ukuqeda ubuhlobo.
Izenzo ezinjalo ngobugwala kwenziwe nge ngenhloso ubuhlungu ngisho nangokwengeziwe omunye umlingani kufanele kugwenywe ngazo zonke izindlela. Kunokuba ukushaya umuntu ngezansi ibhande, umlingani kufanele ngomoya ophansi baveze lokho ubuhlungu naye. Manje yilokhu eyenza umuntu a hero.
Ungakhohlwa ukuveza ukukhathazeka, thandekayo, ukwazisa, nozwela
Noma ubani elwa nabantu abathandana nabo ngaphandle ezwakalisa kunoma ikuphi okungenhla akenzi lutho right. Lena imizwelo ebaluleke kakhulu, ikakhulukazi abantu abanobudlelwano, njengoba ezwakalisa lezi imizwa kuzosiza ukuqinisekisa ukuthi imibhangqwana njalo balwa emihle.
Bamhlonipha kuhilela hhayi abuhlungu umlingani one ngoba bayazi ukuthi umlingani unelungelo lokuphathwa kahle. Ukuze ukuzwelana nomuntu, umuntu kufanele abheke isimo ngombono omunye umuntu.
Musa ukuthethisa, ukuthethisa, hlambalaza
Ine umuntu owake wathola ungamethemba esimweni lapho bengakwazi ukusiza kodwa bathi zonke izinto ezingalungile lapho angry, kodwa bayazi ukuthi akulungile, kodwa bayathukuthela futhi ukucabanga? Ukulwa enza lokho kunoma ubani, ikakhulukazi uma ukulwa ngokungafanele.
Kubalulekile ukuthatha isikhathi sakho ngaphambi kokuphendula intukuthelo. Ungasheshi kakhulu ukukhuluma njengoba amazwi yayiyobizwa sengithi ukuthi ngeke kuthathwe emuva, kungakhathaliseki ukuthi yini. Ukuthetha nokuklabalasa komuntu amaphaphu out and oyedwa ayinhlamba kuphela kuholela ekulahlekelweni izwi komuntu, ivusa izingane kanye cishe lonke komakhelwane.
Ningalwi ngenhloso ukuwina noma kube omunye ngakwesokunene
Lapho silwa nomlingani komuntu, ningazami kanzima kangaka ukuze kube winner, njengoba umlingani ukwenza lokhu kungenzeka nje kube omunye okungalungile. Ukuzama kanzima kangaka ukuba ilungelo nje uya ukukhombisa imizwa yokungafaneleki abanhliziyo, uhlobo ntu, asifuni neze ukuba okungalungile.
Kuyini ukusetshenziswa ngokuwina impi, kodwa ukulahlekelwa umlingani komuntu? Ingabe kuwufanele it? Omunye akufanele bagxila ngokuwina empini bayahluleka ukubona ukuthi kungakanani umlingani wabo bayathinteka. Kuthatha a lot of umzamo ukuhoxisa kancane futhi zihlole isimo, ukubona indlela okungenzeka eyodwa nomthelela ukungavumelani.
Ungazami ukunikeza ukugxeka ngokwakhayo, ngeke isebenze!
Lapho silwa, musa agxeke omunye umlingani, Ukucabanga it is babasize ngoba akuyona. Anyone benza impi ngokuvamile angry kakhulu, futhi ukugxekwa enikezwa okwamanje kwakusho ukuba bezwe ubuhlungu. Into kuphela lokhu ikwazile ukwenza umlingani one BakaJehova bazizwa like baye benza into esingenakuthethelelwa futhi angenakuqhathaniswa.
Kunalokho, kungcono kokukhononda omunye uphathina ngokutshela kubo lokho omunye angathanda ukubona esikhathini esizayo.
Phela kuthiwa futhi kwenziwa, into eyodwa izindandatho weqiniso. Kukhona into efana nokulwa fair, okuyinto ebaluleke kakhulu abantu abanobudlelwano. Omunye afunde emaphutheni abo ngokuqonda hhayi nje lokho okungenzeka kwenziwe ukuqala ukulwa, kodwa futhi lokho abangakwenza ukuze alenze kancono ngalokutako. Noma ubani okwaziyo ukuba balukhulume okuhle futhi fair amakhono ukulwa nakanjani nobuhlobo eside kakhulu futhi happy.
5 Izindlela Creative Ukuthi I Love You